Sekolim-panjakana Tsy mandoa vola aloha ny ray aman-dreny…
Nanokana tetibola ny fitondrana hanamaivana ny Ray aman-dReny, indrindra ny eny amin’ny sekolim-panjakana.
SECES Sampana Antananarivo “Sazio mafy ny mpanakorotana ny bakalorea”
Nisy ny fanambarana nataon’ny SECES Sampana Antananarivo omaly 18 oktobra noho ny hiatrehana ny fanadinam-panjakana Bakalorea, izay vavahady sy kihon-dalana hidirana eny amin’ny anjerimanontolo ho an’ireo mpianatra kilasy famaranana.
Taorian’izay dia nametraka “préavis de grève” 84 ora izay nanomboka ny alatsinainy 16 septambra 2019 izy ireo. Tapitra ny fanambanana fitokonana ka taorian’ny fivoriambe omaly dia tapaka fa miato ny asa fampianarana ao amin’ny oniversiten’i Fianarantsoa mandra-pahazoana valiny mahafa-po avy amin’ny fitondrana. Hatreto dia noferana ho herinandro ny hetsika ka hiverina hivory amin’ny heriny anio handinihana ny tohiny. Nivory ihany koa ny an’Antsiranana ny alarobia 18 septambra, ka andrasana ny tena akony feno. Mananontanona ihany koa ny eto Antananarivo, raha ny akon’ny fivoriambe ny alarobia 18 teo. Momba ny “Indemnité de recherche et d’investigation” sy ny “Heures Complémentaires” (HC), miandry ny fivoahan’ny «Compte administrative » ara-pomba ofisialy ny fandoavana ny IRI 2016 an’ireo mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra misotro ronono sy ny “Heures Complementaires” (HC) 2016-2017 tapany faharoa izay hivoaka tsy ho ela. Tsy azo ekena velively ny famerana ny ho 1500 fotsiny ny ora azo tanterahina ao anatin’ny HC mandritra ny taom-pianarana iray. Raha ny marina aza dia takiana ny fanatanterahana ny andininy faha-31 amin’ny lalàna 1995-023 dia ny fanomezana “prime d’encadrement” ho an’ireo mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra izay nahavita be. Momba ny “gestion publique”: tsy ekena velively ny fampiharana ny lalana mifehy ny “gestion publique, loi 2108- 037” ary ilaina jerena ny tsy mahamety azy eo amin’ny fitantanan-draharaha ety amin’ny anjerimanontolo, indrindra ny and 27 sy 31 momba ny fitantanana ny “établissement public”. Aoka hohajaina ny “autonomie universitaire” ary sanatria ny hiverin-dalana any amin’ny “déconcentration” ’ny raharaham-pampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa satria efa tsy nahitana voka-tsoa izany,… hoy ny ampahany tamin’ny fanambaran’ny SECES Rantsana Antananarivo.